10 एउटा ट्रेनमा सुत्ने उपायहरू | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > 10 एउटा ट्रेनमा सुत्ने उपायहरू
पढ्ने समय:6मिनेट(Last Updated On: 19/02/2021)
3 घण्टा वा 8 घण्टा – रेल यात्रा एक आराम झपकी को लागी सही सेटिंग छ. यदि तपाईंलाई सडकमा निदाउनमा समस्या छ, हाम्रो 10 कसरी रेलमा सुत्ने भन्ने सल्लाहले तपाईंलाई बच्चा जस्तो सुत्नेछ. कुनै पनि ट्रेनमा मीठा सपनाहरूका लागि उत्तम स्थानमा रेल यात्रा आवश्यकबाट आन्तरिक सल्लाहहरू, हामी मीठो सपनाको यात्रामा गइरहेका छौं!
1. एउटा ट्रेनमा सुत्ने उपायहरू: एक कम्बल ल्याउनुहोस्
ट्रेनहरूमा मौसम मिर्च हुन जान्छ, र यदि तपाईंसँग लामो छ वा रातको रेल यात्रा अगाडि, तयार होउ. तपाइँ पूर्ण रूपमा आराम पाउनु पर्छ र तपाइँको यात्रा को लागी झुण्ड जानु पर्छ, र एक हल्का कम्बल कहिल्यै पनि कोजिएस्ट ट्रेन यात्राको जवाफ हुन सक्छ.
निद्रा नलिई रातहरू र आवाश्यकता वा एसीबाट तपाईको यात्रामा काँपनेबाट बच्न, तपाईले सँधै कम्बल प्याक गर्नु पर्छ. बाहेक theतु बाहिर, यो सधैं ट्रेनहरूमा हिउँदको नजिक हुन्छ. त्यसैले, कम्बल ल्याउने हाम्रो एक माथि छ 10 एक ट्रेन मा सुत्न कसरी सल्लाह. कम्बलको मुनि लुक्दा तपाईंलाई सिधा सपनाल्याण्डमा पठाइन्छ.
2. Spotify मा एक आराम प्लेलिस्टमा राख्नुहोस्
तपाईंको कानमा सुखद धुनहरू लोल्ला जस्तो छ जब केबिन हल्लारहेको हुन्छ वा भीडभाडको छ. त्यसैले, तपाईंले Spotify मा केहि प्लेसूचीहरू तैयार गर्नुपर्दछ सुनिश्चित गर्नका लागि कि तपाईंले सुन्नुहुने मात्र चीज संगीत हो. यस तरिकाबाट तपाईं कुनै पनि खराउने वा तपाईंको पछिल्ला यात्री च्याटबाट सुरक्षित हुनुहुनेछ.
प्रकृति आवाज, विश्राम कम्पन प्लेलिस्टहरू, वा तपाईंको मनपर्ने कलाकारको धुनहरू, हो सबै भन्दा राम्रो प्लेलिस्ट विकल्पहरू एक ट्रेन मा राम्रो निद्रा को लागी. संगीत एक हो 10 रेलमा सुत्ने उत्तम तरिका, छोटो वा लामो यात्रा.
3. एउटा ट्रेनमा सुत्ने उपायहरू: एक inflatable घाँटी तकिया ल्याउनुहोस्
खट्टा र कडा घाँटी संग जगाउनु भन्दा खराब केहि छैन. त्यसैले, एक inflatable घाँटी तकिया रेल को लागी एक यात्रा आवश्यक छ. यो बाटो, तिम्रो घाँटी समर्थित छ, र तपाईं मिठो निद्राबाट ब्यूँझनुहुनेछ, तपाईंको अनुहारमा मुस्कानको साथ.
अन्यथा, तपाईं कडा घाँटी संग एक नयाँ साहसिक शुरू जोखिममा हुनुहुन्छ, र सबै नयाँ ठाउँहरूको प्रशंसा गर्ने र उत्तम दृश्यहरू समात्ने कुनै तरिका छैन.
4. हेडफोन ल्याउनुहोस्
राम्रो, साउन्डप्रूफिंग हेडफोन वा ईयरफोनहरू सबैमा छन् यात्रा चेकलिस्ट. हेडफोन एक महान ट्रेन यात्रा को लागी आवश्यक छ, र ती Spotif प्लेलिस्टहरू एक बोन यात्रा को लागी.
यदि तपाईंले घर वा होटलमा तपाईंको हेडफोन बिर्सनुभयो भने, रेल स्टेशन मा धेरै स्टोरहरु छन्. केन्द्रबाट र व्यस्त रेल स्टेशनहरू सानो र अफ-पराजित-पथ स्टेशनहरूमा, ईयरफोन एक वस्तु हो जुन तपाईंले कहिँ पनि भेट्टाउनुहुनेछ.
भेनिस बोल्ोग्ना एक ट्रेन संग
एक ट्रेन संग बोलोना गर्न फ्लोरेन्स
रोमदेखि बोल्ग्ना एउटा ट्रेन
एक ट्रेन संग बोलोना मिलान
5. एउटा ट्रेनमा सुत्ने उपायहरू: आरामदायक पोशाक
तहहरू, कपास, र इको-मैत्री फैब्रिक कपडा ट्रेन सवारी को लागी एक अनिवार्य हो. कल्पना 8 ट्रेनमा घण्टा खुजली स्वेटर वा पातलो शर्टमा, एक निद्रा रात र बिहान टाउको दुखाइ को लागी एक प्रतिज्ञा.
तपाईलाई ट्रेनमा पायजामा लगाउन सहज लाग्दैन, तर प्रशिक्षकहरू र एक पुलओभर उत्तम ट्रेन स्लीपवेयर हुन्. आरामसँग ड्रेसिंग शीर्षमा एक हो 10 कसरी रेलमा सुत्ने, र सबै भन्दा राम्रो यात्रा छ.
6. निद्रा मास्क ल्याउनुहोस्
पाठ्यक्रमको अर्को आवश्यक यात्रा अन्तिम निद्रा मास्क हो. पछाडी फर्क, तपाईंको आँखा ढाक्नुहोस् र कुनै प्रकाश टाढा राख्नुहोस् तपाईंलाई राम्रो निद्राको लागि आवश्यक छ. यो एक ज्ञात तथ्य हो कि यदि तपाइँ एक राम्रो रातको निद्रा चाहानुहुन्छ, तपाईंले कुनै पनि चिढचिढो व्याकुलता हटाउनु पर्छ, र कुनै पनि प्रकारको प्रकाशबाट आफूलाई हटाउनुहोस्.
यदि तपाईं निजी केबिनमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्न भने, र प्रकाश स्विच मा नियन्त्रण छैन, निद्रा मास्क प्याक गर्न निश्चित गर्नुहोस्. त्यसपछि, तपाईको चिन्ता लिने कुनै चीज छैन यदि तपाईको छेउछाउको यात्रीले रातभरि पढ्ने निर्णय गर्छ वा ट्रेनको उज्यालो पनि उज्यालो छ भने।.
7. एउटा ट्रेनमा सुत्ने उपायहरू: तपाईंको भावना सुरक्षित राख्नुहोस्
तपाईंको काँधमा र तहहरूको मुनिको सानो पर्स वा झोला तपाईको स्वामित्व सुरक्षित राख्न उत्तम तरिका हो. निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको पासपोर्टको लागि पर्याप्त ठाउँ छ, वालेट, मोबाइल, र कुनै पनि अन्य ग्याजेटहरू तपाईं सँगै ल्याउने योजना गर्दै हुनुहुन्छ.
यस तरीकाले तपाईं राम्रो र चिन्तामुक्त ट्रेन यात्रा गर्न सक्षम हुनुहुनेछ, बरु एक आँखा खुला संग सुत्न भन्दा.
8. बीचमा बीचमा गाडी दिनुहोस्
मिठाई सपनाहरूको लागि उत्तम स्थान गाडीको बीचमा छ. यसको कारण यो हो कि मध्य कुनै पनि प्रवेशद्वारबाट धेरै टाढा छ, यदि मामलामा बाटोमा रोकिन्छ. साथै, तपाईं सुरक्षित हुनुहुन्छ र बाथरूम र कुनै पनि सुगन्धबाट टाढा जानुहुन्छ.
तथापि, यदि तपाईं स्लीपर ट्रेनमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, यो सम्भवतः तपाईंले कुनै चुनौतीको सामना गर्नुपर्दैन. यो तथ्यको कारणले हो, कि स्लीपर ट्रेनहरू A-B ट्रेनहरू छन्, कुनै बाटोमा रोकिदैन, र त्यसैले, कुनै अवरोधहरू छैनन्.
पिसा एक ट्रेन संग रोम
9. तपाईंको फोन टाढा राख्नुहोस्
आजकल सम्पूर्ण विश्व तपाईको मोबाइल फोनमा छ. संग अनन्त अनुप्रयोग र खेलहरू, सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको लग आउट गर्नु र तपाईंको फोनलाई टाढा राख्नु हो. यो विशेष गरी गाह्रो हुन्छ जब तपाईं लामो दूरीको यात्रामा हुनुहुन्छ, रेलमा, कतै पनि जाने छैन.
तथापि, रेलमा सुत्नको लागि हाम्रो शीर्ष सुझावहरू मध्ये एक तपाईंको फोनलाई झोलामा राख्नु हो, वा उडान मोडमा पनि.
10. एउटा ट्रेनमा सुत्ने उपायहरू: पढ्ने सामग्री ल्याउनुहोस्
कुनै राम्रो कहानी भन्दा राम्रो मन को लागी केहि पनी सेट गर्दैन, र यो तपाईको रेलमा राम्रो निद्राको लागि चाहिने जस्तै हो. तपाईंको मनपर्ने पत्रिका ल्याउँदै, वा पुस्तकमा रेल यात्रा एक ट्रेन मा सुत्न को लागी एक उत्तम सल्लाह हो.
जब तपाइँ पढ्दै हुनुहुन्छ तपाइँको दिमाग अर्को स्थानमा यात्रा गर्दछ, सेटिङ, र सबै दिनको चिन्ताहरू हराउँदछन्. एक महान पढाइ एक उत्कृष्ट विश्राम व्यायाम हो, taking your mind off any meticulous details. For an hour or two, तपाई टाढा जानुहुन्छ, र तपाइँ निदाउन र दूर सपना बनाउन पर्याप्त छ.
यहाँ मा एक ट्रेन सेव, हामी तपाईंलाई एउटा अविस्मरणीय रेल यात्राको योजना बनाउन सहयोग गर्न खुसी हुनेछौं, उत्तम सिटहरू र उत्तम दरहरूको साथमा एक अनौंठो ट्रेनको निद्राको लागि.
के तपाइँ हाम्रो ब्ल्ग पोष्ट एम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ "१० सल्लाहहरू कसरी एउटा ट्रेनमा सुत्ने" तपाईंको साइटमा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-how-sleep-on-train%2F%3Flang%3Dne اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
BestTipsSleeponTrain निद्रामा sleeper SleeperTrainsEurope SleepOnATrain रेल यात्रा ट्रेन यात्रा सल्लाह